ရန်ပိုင်| September 6, 2012 | Hits:16,586
kochitko September 6, 2012 - 11:42 pm စစ်တပ်ဟာအရေအချင်းကြဆင်းနေပါပြီ။ပိုက်ဆံရှာစားရတဲ့ဘ၀ကကျွတ်မှ။စိတ်ပါဝင်စားပြီးတပ်ထဲဝင်တဲ့သူရှိနေမှ။အဂေအတွက်ထက်အရေအချင်းကိုဂရုစိက်တတ်မှ။စစ်တပ်တိုးတက်လာမှာပါ။
Reply thuratun September 6, 2012 - 11:42 pm သမတဦးသိန်းစိန်၏ပြောင်းလဲမှုသည် ၁၀% မျှနှင့်ပြည်သူကိုလှည့်စားနေခြင်းဖြစ်သည်။အခုအ
Reply Hso Ngan September 7, 2012 - 1:10 pm That is Myanmar democracy(fake) way.
Reply asm September 7, 2012 - 12:08 pm လက်ရှိစစ်ဥပဒေချုပ်က အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကို ရောက်လာတော့မယ်ထင်တယ်။
Reply မမ September 7, 2012 - 3:28 pm စစ်ခေါင်းဆောင်တွေသိပ်စစ်တိုက်ချင်ရင် ရန်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ WWF အသေချပွဲ
Reply natttharr September 8, 2012 - 5:11 pm Why should they put the disgraced commanders into government posts? If they are afraid of firing them, send them to UMHEL, MEC, Myawaddy or Inwa Bank.
Reply THET THET EI NAING September 10, 2012 - 11:06 pm တကယ်ဆိုရင် တပ် က… ၀န်ကြီးတက်လုပ်နေဖို့ လိုသေးလား … It is not really changes that all we know
Reply မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသား September 13, 2012 - 10:18 pm အခုမှ သူ့နေရာနှင့်သူဖြစ်တယ်